Pharyngitis zviratidzo | Bezzia
Tony Torres | 09/06/2021 23:55 | Zvirwere
Pharyngitis, pahuro, kana tonsillitis? Kunyangwe mazwi aya anowanzo shandiswa zvisina tsarukano Kutaura chinhu chimwe chete, chokwadi ndechekuti aya akasiyana matambudziko. Iyo huro inogona kukuvadza semhedzisiro yehutachiona, iyo inokonzeresa kuzvimba kutenderedza matoni, asi kwete matoni iwo pachawo. Kana izvi zvikaitika, zvinonyatsoita tonsillitis zvinogona kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana.
Asi kana paine pharyngitis, chii chaizvo chinoitika ndechekuti iyo pharynx inopiswa. Uku kuzvimba kunoitika semhedzisiro yehutachiona hutachiona. Hutachiona uhwu hunokonzera kuzvimba kwakanyanya mumatoni, pamwe nenzvimbo yese yehuro. Pharyngitis inofambidzana nekurwadziwa, kupisa muviri, kunetseka kumedza, uye kusagadzikana izvo zvinowanzoitika kweinenge vhiki.
1 Ndezvipi zviratidzo zve pharyngitis
1.1 Kurapa kwepharyngitis
1.2 Kudzivirira pharyngitis
Ndezvipi zviratidzo zve pharyngitis
Wakatarisana neinpipient inorwadza huro, zvakakosha kuti utore matanho ekudzivirira kudzivirira mhedzisiro. Nekudaro, kana hutachiona hutachiona hukaitika, zvakaoma kwazvo kudzivirira zviratidzo kuti zvisaonekwa mune imwe neimwe nyaya. Kuti uone pharyngitis inogona kuitika, zvakanakira kuenda kuhofisi yechiremba kuitira kuti pamusoro pekuongororwa, ipai nzira yemishonga inorwisa mabhakitiriya inojekesa hutachiona.
Izvi ndizvo zviratidzo zve pharyngitis izvo zvinogona kukubatsira kusiyanisa imwe nguva inorwadza huro kubva kuhutachiona hunoda kurapwa kwemishonga.
Maronda pahuro: kurwadziwa kwehuro ndicho chikuru uye chakanyanya kuoneka chiratidzo chepharyngitis. Unogona kucherechedza apkumanikidza kwakasimba pamutsipa wako, munzvimbo yepakati yakakomberedza matoni.
Zvimba matoni: Kana kuzvimba kwepharynx kukaitika, matoni anogona kukanganisika nekupiswa zvakanyanya. Chii inodzivirira kumedza zvakajairika, Kuburitsa kurwadziwa kwakasimba kunyangwe neyakareruka chiratidzo chekumedza mate.
Fivha: Hutachiona hunogona kukonzeresa kupisa muviri, pamwe neyakajairika malaise, kurwadziwa kwemhasuru uye kushaya simba. Zviratidzo izvi zvakafanana zvakanyanya neaya ehururu.
Kuzvimba lymph node mumutsipa: Iwo ma "lymph node" ari mumutsipa anowanikwa mushaya yepasi, akasungirirwa pamutsipa uye pharynx. Kana hutachiona hwakakosha, mapundu anogona kuzvimba zvekuti zvionekwe nemeso akashama.
Nzira chete inoshanda yekurapa pharyngitis kushanyira chiremba wako. Izvo zvakakosha kuti nyanzvi iongorore zvinokonzeresa pharyngitis, pamwe nekuomarara kwayo, kuti inyore kurapwa kwakaringana. Nekuti iyo njodzi yekusarapa iri dambudziko nenzira kwayo inogona kutungamira kune chisingaperi pharyngitis. Kurapa kunogona kuenda kuburikidza nekudyiwa kwe chaiwo mishonga inorwisa mabhakitiriya, pamwe nekudzora marwadzo.
Kudyiwa kwakanyanya kwemvura kwakakoshawo, sezvo fivha inogona kukonzeresa kupera mvura mumuviri. Uye zvakare, inofanirwa kuwedzerwa kuti kunetseka mukumedza kunokonzera kuti kwemazuva mashoma iwe haugone kutora chero chikafu chakasimba. Naizvozvo, iyo kunwa kweanopisa emvura chikafu, ane hutano hwakanyanya muto, chaiwo majuice izere nemavitamini uyezve, yakawanda mvura.
Zororo chikamu chakakosha chekudzoreredza, seiyi nzira immune system inogona kusimbiswa ichirwisa hutachiona. Iwe unogona zvakare kubatsira huro yako kupora nekukweva nemvura uye kubheka soda. Edza kuzorora zvakanyanya sezvinobvira, usataure kuti udzivise kugumbura huro zvakanyanya uye uchitendere kuti inyatso zorora usati wadzokera kune ako akajairwa mabasa.
Kusagamuchira kurapwa kwakakodzera muchiitiko chimwe nechimwe, kunogona kukonzera pharyngitis kutungamira kumatambudziko makuru kunge hutachiona nzeve kana sinusitis. Saka zvakakosha kutevedzera zvakataurwa nenyanzvi nezvekurapwa. Kunze kwekutora matanho anodiwa ekudzivirira, ayo anosanganisira hutsanana nemaoko, kudzivirira zvinwiwa zvinotonhora zvakanyanya kana kuchengetedza mutsipa munzvimbo dzakanyanyisa.
Muzviitiko zvakawanda hutachiona hutachiona hunogona kudzivirirwa, kutora matanho ekutanga. Kugara kure nevanhu vanoratidza zviratidzo zve pharyngitis kwakakosha, saka, kana uine vana kumba, unofanirwa kuona kuti havaswedere pedyo kuti uvadzivise. Iko kushandiswa kwemask, pamwe nehutsanana hwemawoko kwakanaka kuchakubatsira iwe kuchengetedza mhuri yako kuiyi uye nemamwe hutachiona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvirwere » Zviratidzo zve pharyngitis